သင်အွန်လိုင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ရန်မည်မျှလွယ်ကူသနည်း။ | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဇွန်လ 26, 2009 Douglas Karr
နေ့တိုင်းလိုလိုအွန်လိုင်းထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့လင့်ခ်များကိုကျွန်ုပ်ရရှိနေပြီးကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သွားလိုသောနေရာကိုသွားရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ဝဘ်ဆိုက်များကိုမည်မျှတည်ဆောက်ကြသည်ကိုကျွန်ုပ်အံ့သြမိသည်။ အကယ်၍ သူတို့ကဒါကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မထင်ရင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာအတော်များများနဲ့ငါအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်။
လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်ကဆိုလျှင် multi-form ဖြစ်စဉ်ကို ဖြတ်၍ ကျွန်ုပ်သည် site ကိုအသုံးပြုရန်မှတ်ပုံတင်ထားသောသုံးစွဲသူဖြစ်ရန်သာရှာဖွေခဲ့သည်။ ငါမှတ်ပုံတင်တုန်းကအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာအားလုံးပျောက်သွားတယ်။ ငါပြန်မသွားဘူး ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့်ဆိုဒ်များအကြောင်းပြောမည့်အစား၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တခုကိုထိမိလိမ့်မည် ကိုပြု အစားကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်!
မနေ့ကငါကြောက်မက်ဘွယ်သောခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခေါင်းကိုက်ခံစားနေရပြီးခဲ့သည်။ ငါသိပ်မကြာသေးခင်ကမှလေးလေးနက်နက်ဖိအားပေးခံရတယ်။ ငါကတိကဝတ်တွေအများကြီးရွတ်ဆိုနေတယ်။ ငါ့ရဲ့ဘဝ / အလုပ်သံသရာဟာကြီးမားတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ငါသည်လည်းစနစ်တကျအစာစားခြင်းနှင့်မလိုအပ်သောပေါင်အချို့ကိုချပစ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ သူငယ်ချင်းစုံတွဲတစ်တွဲကပြောပြီးပြီဆိုရင်အဲဒါကိုတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ ငါဆရာဝန်တွေမသွားချင်ဘူး, ဒါကြောင့်ငါကအခြားရွေးချယ်စရာရှာနေ။
ငါမှသွားလာ အနာပျောက်စေသောသော့ ဆိုက်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုဖတ်ပါ၊ အဲဒီမှာ ၀ မ်းသာနေသဖြင့် အွန်လိုင်းစီစဉ်သူ (ထိပ်ဆုံးမှာ စာမျက်နှာတိုင်း!) ကျွန်ုပ်၏အချိန်ဇယားကိုစစ်ဆေးပြီးယခုစနေနေ့နံနက်တွင်ချယ်လီကိုစီစဉ်ရန်မိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်သည်။ သင်၏ဆိုဒ်သည်မည်မျှလွယ်ကူသင့်သနည်း။ ဟုတ်လား?
ဇွန် 26, 2009 မှာ 3: 22 pm တွင်
ချိုမြိန်။ ကျွန်ုပ်သည် လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က အွန်လိုင်းတွင် Ossip's Circle နှင့် ချိန်းထားသည်။ ဒါဟာ လွယ်ကူပြီး နာကျင်မှုမရှိသလို ဘယ်သူ့ကိုမှ စကားပြောဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ငါက ခွေးရူးဆိုတော့ ငါမသိတဲ့လူနဲ့ သေချာပေါက် စကားပြောရတာ မကြိုက်ဘူး။ 🙂
ဇွန် 26, 2009 မှာ 11: 17 pm တွင်
"ဖောက်သည်မရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ- စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမှားငါးခု" ကဲ့သို့သော ဤစာပိုဒ်အချို့ကို ကျွန်ုပ်ရေးခဲ့ပြီးပြီ၊ ဤနေရာတွင် သင့်မှတ်ချက်များကို လင့်ခ်များဖြင့် ညစ်ညမ်းစေမည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏ disqus စာရင်းဝင်ဝဘ်ဆိုက်တွင်မဟုတ်ပါ (ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသာရှိပါလျှင် မည်သူနည်း။ )